तपाई स्वर्ग र नर्कमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? यस्ता काम गरे जानुपर्छ नर्क — sancharkendra.com
काठमाडौं । हिन्दू धर्मअनुसार मानिसले के गरे फल पाउने र के गरे हानी हुने भन्ने विश्वास छ । शास्त्रमा पनि मान्छेले कामअनुसार फल पाउने उल्लेख गरेको पाइन्छ । मानिस सफल हुने कि असफल हुने, सुखी या दुःखी हुने, मृत्युपछि स्वर्ग जाने कि नर्क भन्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । संसारका सबै धर्मले गलत काम गरे नर्कमा जाने बताएका छन् । हिन्दू धर्ममा पनि नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति नर्क जाने विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
गरुड पुराणमा मान्छेले गलत काम गरे नर्क जाने र नर्कमा कठोर सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।के गर्दा नर्क गइन्छ त ? हिन्दू धर्मका अनुसार यस्ता छन् गर्न नहुने काम:
स्त्रीको अस्मिता लुट्ने
हिन्दू धर्मले मात्र होइन, सबैले स्त्रीको अस्मितालाई महिलामा भएको सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्ने गर्छन् । कुनै पुरुषले नारीको अस्मितामाथि खेलवाड गरेमा उसलाई नर्कमा बास हुने विश्वास गरिन्छ । गरुड पुराणका अनुसार गर्भवती महिलाको ह’त्या गर्नु महापाप भएको उल्लेख छ । यस्ता अपराध गरेका व्यक्ति मृत्युपछि नर्कमा जाने उल्लेख छ ।
नवजात शिशुको ह’त्या
गरुड पुराणका अनुसार नवजात शिशुको ह’त्या गर्ने व्यक्ति नर्कमा जान्छ । त्यस्तै शिशु ह’त्यालाई पनि गरुड पुराणमा महापाप भनी उल्लेख गरिएको छ ।
पूजास्थलको अपमान गर्न नहुने
कसैले पूजास्थल या पूजा भइरहेको ठाउँको अपमान ग¥यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नर्कमा बास हुने विश्वास गरिन्छ । धार्मिक काम भइरहेका ठाउँको अपमान गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यदि तपाईंले कसैलाई विश्वासघात गर्नुभयो भने तपाईं नर्कमा जाने गरुड पुराणमा उल्लेख छ । यस्ता विश्वासघातीलाई नर्कमा कठोर सजाय हुने बताइन्छ । यस्तै अपशब्द बोल्ने र अरुलाई धोका दिनेलाई पनि नर्कको बास हुन्छ ।
आफ्नो घरमा आएका पाहुनाको अपमान गर्ने वा उनीहरुलाई खाना नखुवाउने व्यक्ति पनि मृत्युपछि नर्कमा जान्छ । गरुड पुराणले घर आएकालाई विमुख फर्काउन नहुने बताएको छ ।
गरीबलाई सहयोग नगर्ने
गरीब तथा अपाङ्गहरुलाई सहयोग नगर्ने र उपेक्षा गर्ने व्यक्ति पनि मृत्युपछि नर्कमा जाने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्तिलाई नर्कमा कठोर सजाय हुन्छ । अरुलाई खुशी हुन नदिने- यदि कसैले अरुको खुशी लुट्छ भने पनि उसले नर्कमा बास पाउने निश्चित छ । पुराणका अनुसार यस्तालाई नर्कमा कठोर सजाय हुन्छ ।
विहान उठ्नासाथ धर्तीमा टेक्नुभन्दा पहिला पृथ्वीलाई प्रणाम गर्नु पर्ने हिन्दू धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । किनकी धर्ती हाम्रो पालनकर्ता हो । हाम्रो जीवनका लागि सबै आवश्यक पदार्थ धर्तीले नै हामीलाई उपलव्ध गराउँछ चाहे पानी या भोजन । त्यसैले धर्तीको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
आज राति १० बजेदेखि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, भुलेर पनि यस्ता कार्य, नत्र हुनेछ ठुलो अनर्थ